Ngaphandle Kweendonga KwiNdlu Yakho, Uphi ...
UbuGcisa bobuGcisa Iingcebiso kunye nezixhobo zabanini bezindlu
Shigeru Ban kunye neNdlu engenakho iindonga
Ukuqwalasela izindlu ezingaphantsi kwee-Wall ze-Shigeru Ban
Kwindlu engenazo izindonga, isigama kufuneka sitshintshe. Akukho ndawo yokuhlambela, akukho gumbi lokulala , kwaye akukho ndawo yokuhlala kuyo . Ulwakhiwo olungaphantsi kodonga lukwazisa ulwimi olungaphantsi kolwimi.
Umakhi waseJapan uShigeru Ban (owazalwa ngo-Agasti 5, 1957 eTokyo, eJapan) wadala le nto yangasese e-Nagano, eJapan, ngonyaka ngaphambi kweMidlalo yeOlimpiki yaseYurophu ka-1998. Jonga ngokukhawuleza. Indlela ezantsi apho ekupheleni kwe-hallway? Ingaba yindlu yokuhlambela? Kukho indlu yangasese kunye nebhati, ngoko kufuneka ibe yindlu yokuhlambela - kodwa akukho ndawo . Yindawo yokugqibela evulekile ukuya kwesokudla. Kuphi indlu yokuhlambela endlwini engaphantsi kodonga? Phandle ngaphandle. Akukho mnyango, akukho ndlu, ayikho indonga.
Nangona kubonakala ngathi ayinalo indonga, iindawo ezibonakalayo phantsi kunye nesilwanyana kubonisa iingoma zabahluleli abahambahambayo, iipaneli ezingashenxisa endaweni ukuze zenze izindonga - ngokukodwa, kubonakala ngathi, malunga nommandla wokuhlambela. Ukuphila kunye nokusebenza kwiindawo ezivulekileyo ziyiyokhetho esiyikhethayo kwaye senzelwe yona. Makhe sibone ukuba kutheni.
Indlu engaphantsi kweNdonga e-Nagano, ngo-1997
Ngaphandle kwe-Shigeru Ban-eyenzelwe i-Wall-Less House, ngo-1997, i-Nagano, eJapan. Ifoto nguHiroyuki Hirai, uShigeru Ban Architects onobubele u-Pritzkerprize.com, uguqulwe ngokuxuba
Indlu edibeneyo yaseShigeru yaseJapan ayikho kuphela isicwangciso sovulo esingaphandle sendawo, kodwa sinanani elincinci leendonga zangaphandle. Unokucinga ukuba i-dirty floors kufuneka ifumaneke, kodwa ukuba unako ukufumana indlu eyenziwe yinkcubeko ngePritzker Laureate, unako ukufumana abasebenzi abahlala rhoqo.
IShigeru Ban yaqala ukuzama izithuba zangaphakathi kubaxumi abacebile baseJapan kuma-1990. Ubuncwane bendawo ekhethiweyo yokuhlala - ukulawula indawo kunye nabahlukanisi kunye nokusebenzisa izinto ezingapheliyo, iimveliso zoshishino - zifumaneka nakwiindawo zaseBethel yaseNew York City. Isakhiwo seState Shutter House siseduze nesakhiwo saseFrank Gehry sika-IAC kunye neJeannes 100 ye-11th Avenue kwinto eye yaba yi-Pritzker Laureate endaweni yaseCentral. NjengoGehry no-Nouvel phambi kwakhe, uShigeru Ban uzuze udumo oluphezulu lwezakhiwo, uPritzker Prize , ngo-2014.
Umakhi waseJapan u-Shigeru Ban uchaza ukuyila kwendlu yakhe engaphantsi kwe-1997 e-Nagano, eJapane:
"Indlu yakhiwe kwindawo yokuloba, kwaye ukuze kuncitshiswe umsebenzi wokucubungula isigxina esingaphandle kwendlu sibiwe emhlabathini, umhlaba ogqityiweyo uyasetyenziselwa ukuzaliswa kwisigxina esingaphambili, ukudala umgangatho womgangatho. kwinqanaba elingemuva lokungena kwezindlu ukuza kudibana nophahla, ngokwemvelo ukuxhatsha umthwalo owenziwe ngumhlaba. Uphahla luyi-flat and fixed fixedly to the slab upturned ekhupha iikholam ezi-3 ngaphambili phambi kwayo nayiphi na imithwalo engapheliyo. Umphumo wokuthwala kuphela imithwalo enobungqina kule miqolo ingancitshiswa ibe ngu-55 mm ububanzi ubuncinane. Ukuze uvakalise ingcamango yesakhiwo njengoko kunokwenzeka ukuba zonke iindonga kunye neelingiliyoni zihlanjululwe zishiya kuphela iipaneli ezilahlayo. 'umgangatho wendawo yonke' apho ikhitshi, indlu yokuhlambela kunye neyendlu yangasese yonke ifakwe ngaphandle ngaphandle, kodwa leyo ingabelana ngokwahlukileyo ngeengcango zokululela. "
I-Grid House Grid, ngo-1997
Ngaphandle kwe-Shigeru Ban-eyenzelwe i-Grid House Grid, ngo-1997, eKhanagawa, eJapan. U-Hiroyuki Hirai, uShigeru Ban Architects onobubele u-Pritzkerprize.com (unqabile)
Unyaka lowo umcebisi waseJapan owayelungileyo wayegqibelele iNdlu-encinane kwiNdlu e-Nagano, i-Pritzker Laureate izayo yayizama iimpawu ezifanayo kwiikhilomitha ezilikhulu kude eKhanagawa. Akumangalisi kukuba, iNdlu yeGridi yeNtandathu-Square inecebo lomgangatho wesango, malunga neenyawo ezili-34 kwicala ngalinye. Umgangatho kunye nelayili zihlukaniswe zibe zi-9 zesikwere, njengombhobho webhokisi ye-tac-toe, kunye neengoma ezigungqelekileyo zokulahla izahlulo - uhlobo lwegumbi lakho-naluphi na-ufuna amandla kulo mnikazi wendawo.
Izizathu Ezilungileyo Zithathu ZeNdlu Ngaphandle Kweendonga
Ukuba indawo yakho yokuhlala yinto yonke malunga nombono, kutheni iindawo zokuhlala ezahlukileyo zivela kwindawo engqongileyo? Iimveliso zodonga lweglasi ezikhenkcelayo ezifana neNanaWall Systems zenza iindonga zangaphandle ezingapheliyo kwiimeko ezininzi. Kutheni ufuna ukufuna ukwakha indlu ngaphandle kweendonga?
Ukuyilonga Ukufuna Ingqondo: Iindonga zangaphandle zingafuneka kwizindlu kunye nabantwana kunye nabantu abanokulahlekelwa kwememori. Nangona kunjalo, iindonga zangaphakathi zivame ukudibanisa abantu abajongene neengqondo eziqhubekayo.
Ukucima isikhala: I- Feng Shui icetyisa ukuba indawo yokucoca ifunekayo xa amandla aqokelela kumazinga angenakulungileyo. "Ku-feng shui," uthi uFeng Shui uchwepheshe uRodika Tchi, "indawo efanelekileyo yeendonga ingakhuthaza ukuhamba kakuhle kwamandla kunye nokukhuthaza iimvakalelo ezintle ekhaya."
Iindleko zokugcina : Iindonga zangaphakathi zingongeza kwiindleko zokwakha kwaye ngokuqinisekileyo zongeze kwiindleko zokuhlobisa ngaphakathi. Ngokuxhomekeke kwindlela yoyilo, ubunjineli kunye nezinto eziphathekayo, ikhaya ngaphandle kweendonga zangaphakathi linokubiza kakhulu kunelo lwakhiwo oluqhelekileyo.
Izicwangciso zeMpawu zoBuvulekileyo
I-Great Workroom, ngo-1939, kwiZakhiwo zikaJohnson Wax, Racine, Wisconsin. UCarol M. Highsmith / Getty Izithombe (i-cropped)
Izicwangciso zomgangatho ovulekileyo awunanto entsha. Ukusetyenziswa okuqhelekileyo namhlanje kwiplani yesango evulekile kusezikhundleni zezakhiwo. Izikhala ezivulekile zingakwandisa indlela yeqela kwiiprojekthi, ngokugqithiseleyo kwizakhono ezifana nezakhiwo. Ukunyuka kwe-cubicle, nangona kunjalo, kuye kwakha amagumbi okhethwe ngaphakathi kwindawo enkulu "yefama yeofisi".
Esinye sezicwangciso ezidumileyo kwiofisi evulekileyo yindawo yokusebenzela eyenziwa ngo-1939 ekwakhiweni kweYohnson Wax eWisconsin nguyena waseMelika uFrank Lloyd Wright (1867-1959). UWright waziwa ngokuyila izithuba ezicwangcisiweyo zomgangatho. Uyilo lwakhe lwendawo lwangaphakathi luvela kummandla ovulekileyo weNdwendwe.
Umzekelo "wesikolo ovulekileyo" wokwakhiwa kwesikolo kwiminyaka ye-1960 kunye neye-1970 yabonisa ukuba indlu yesiklasi esisodwa yayininzi kakhulu. Inkolelo yokufunda evulekile yayibonakala ingumzekelo omuhle, kodwa ulwabiwo olungaphantsi kodonga lwakhiwa indawo engabonakaliyo kumagumbi amakhulu; Iindonga zokunyusa, iindonga zesigxina, kunye nefenitshala ebekwe ngokufanelekileyo zibuyise izikhala ezivulekileyo kwiindawo zokufundela ezifana neziklasi.
EYurophu, iRietveld Schröder House, eyakhiwe eNetherlands ngowe-1924, ngumzekelo wesimboli we-De Stijl Style. Amakhowudi wokwakha aseDutch agxininisa umqambi uGerrit Thomas Rietveld ukudala amagumbi kumgangatho wokuqala, kodwa umgangatho wesibini uvulekile, kunye neepaneli ezihambayo ezinjengekhaya likaShigeru Ban e-Nagano.
I-Metal Shutter House nguShigeru Ban, NYC. Jackie Craven
Ngoko, kutheni sakha indawo evulekileyo kuphela ukuba senze idibanisa indawo yangaphakathi, ukwakha izindonga kunye namagumbi okuhlala kuyo? Izazi zentlalo zingachaza le nto njengengxenye yokuziphendukela kwemvelo - ukuhamba kude emqolombeni ukuhlola indawo evulekile, kodwa ubuyela kwindawo ekhuselekileyo yendawo. Iingcali ze-Psychotherapists zingabonisa ukuba zibanjelwe ukuphuhliswa - umnqweno ongenalwazi ukubuyela kwisibeleko. Inzululwazi zentlalo inokuthi ukuhlukanisa isikhala kufana neengcambu zolucalulo, ukuba senze amaqhinga kunye nokudibanisa ukuhlela ulwazi kunye neengqiqo zehlabathi ezisijikelezayo.
UDkt. Toby uSirayeli uza kuthetha konke malunga neChrochology.
Njengoko i-psychologist yezosingqongileyo i-Toby Israel iyichaza oko, ukucwangcisa i-psychology "Ukusetyenziswa kwezakhiwo, ukucwangcisa kunye noyilo lwangaphakathi apho i-psychology yinto yokuyila eyinqununu." Kutheni abanye abantu bekhetha icebo elivulekile, kodwa kwabanye ukuyila kudala uxhalaba? UDkt. USisrael unokubonisa ukuba kunento enokuyenza ngayo, kwaye kungcono ukuba wazi kakuhle ngaphambi kokuba uqale ukuhlala kwindawo. Uthi "sinalo mlando wexesha elidlulileyo, kwaye asinakuziqonda."
UDkt. Israel uye wavelisa "Ibhokisi leBlukthi yeeNkcukacha zePhysical Psychology," uchungechunge lwezifundo ezilisithoba ezenza umntu (okanye iimbini) zangaphambili, ezikhoyo kunye nekamva. Enye yezinto zokuzilolonga kukukwakha "imithi yentsapho yendalo" yeendawo esihlala kuzo. Ingxelo yakho yendalo yendalo ingabonisa indlela oziva ukhululekile ngayo ngeendlela ezithile zokupasa ngaphakathi. Uthi:
" Xa ndisebenza kunye neendawo zokunakekelwa kwezempilo ukuze ndibancede baqulunqe igumbi lokulindela okanye indawo, ndibenza ukuba bacinge ngeyiphi indawo yendawo, yintoni indawo yangasese, yintoni na indawo eyimfihlo yedwa, yintoni isikhala seqela ukuze iintsapho zidibane kunye into enjalo into. Ngokwenene izinto ezibangelwa ngabantu. "
Umbutho wendawo awukhethi nje ukukhetha, kodwa kunye nokuziphatha kwenkcubeko kunye noluntu. Isicwangciso sokuvula esicacileyo - nokuba yindlu yokuhlambela ngaphandle kwodonga - ingaba yamkelekile ngakumbi xa ubelana ngendawo kunye nomntu oyithandayo. Kulungile kodwa, ukuba uhlala wodwa, indawo evulekileyo iba njengendawo yokuhlala, i studio okanye igumbi lokulala. Kwabaninzi kuthi, iindonga zokuhlukana zibonisa ukuba intlalo-qoqosho ishukunyuka isiteji esinokubakho kwiindawo ezigumbini elinye. Oku akuvumi ukuba abakhi bezakhiwo ezifana neShigeru Ban, abaqhubeka bezama indawo yokuhlala kunye nezinto zokwakha.
I-Ban's Metal Shutter House, isakhiwo esincinane sezakhiwo ezili-11 kwi-West 19th Street e-New York City, sinamaqela angama-8 nje kuphela, kodwa iyunithi nganye ingavulelwa ngokupheleleyo. Eyakhelwe ngo-2011, iinqununu zamabini amabini ziyakwazi ukuvuleka ngokupheleleyo kwiitrato ze-Chelsea ezantsi-zombini iwindi yefestile kunye ne-shutter ye-metal shutter ingagqitywa ngokupheleleyo, iphule umqobo phakathi kwangaphakathi nangaphakathi, kwaye iqhube phambili ukuzama ukuvota kweBhan nge-wall-lessness .
> IWALL-LESS HOUSE - Nagano, Japan, 1997, IMISEBENZI - Izindlu kunye nezindlu zokuhlala, i-Shigeru Ban Architects
> Vula iiWallows zokuVimba kunye neFeng Shui, ngo-Rodika Tchi, i-https: //www.thespruce.com/open-up-blocking-walls-with-feng-shui-1275331 [eyafumaneka ngoNovemba 22, 2017]
> Ukuqulunqa i-Psychology, iToby Israel Consulting, Inc [ifumaneka ngoJulayi 20, 2014]
> Udliwano-ndlebe noToby Israel: Ukufumana Imali Yakho Yomhlaba kunye noJudith West [kufumaneka ngoJulayi 21, 2014]
Izindlu ezimnyama kunye ezimhlophe - Iipaseji eziya kwiiMpawu eziMbala
Indlela yokwakha uMhlaba weBlock Home
I-Ranch Style House Plans ukusuka kuma-1950
7 Iingcamango Zokunceda Ikhaya Lakho Ngaphandle Kobumnyama
Indala Yakho Indlu Yakho?
Pendeza Ikhaya Lakho Ngomthunzi Oluhlaza
8 Izindlela ezilula zokongeza isikhalazo seKharb
11 Iincwadi Zonke Ngokungena kwiiHolo kunye neeKhabini
Izinketho zangaphandle zeTyinge kwiNdlu yakho
Iimbali zeMbali kunye neNdlu yeMveli yokuHlanganisa
Super Bowl Stadium kunye neMidolophu yeeMidlalo
Ukuqonda ukuxhaswa kwe-Ethanol
Ziziphi iiNkundla zeSikolo zoBulungisa okufanele ndizithabathe?
Iifayile ezifanelekile kwi-Oscar yoLwimi oluPhambili lwamaLwimi angaphandle?
I-College yeSiena i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT
Ukulimala okuqhelekileyo koDaniso
IziTyikityo ezibalulekileyo kunye ne-Sharps
Iindlela zokuchaza ubugcisa
Abamkelwayo kwiYunivesithi yaseMelika
Imfazwe yeMpondo kwiYunivesithi yaseAuburn
IsiNgesi sase-Estuary (iilwimi ezahlukeneyo)
Ikhuselekile kangakanani iBhodi ye-Ouija?
Iindlela ezihlanu eziqinisekileyo zokufa
Isikhokelo kwiNkcubeko yangaphambi kweClovis
Indlela Yokufumana Umbala Owodwa Wobugqwetha kwiMpawu ezintsha
Isibhengezo sama-35 sikaStevie Wonder ka-1981 DC kwiRally yeHolo yamaKhosi
Hlola iWonders of Winter Hexagon
IsiFrentshi 101: Funda iLizwi elithi "Kif-Kif"
Ukuqonda i-Stare Decisis
I-Mary Mary College yase-Indiana GPA, SAT kunye ne-ACT